Boanamary-Faritra Boeny: natao ny voly hazo ho fanatsarana ny fiompiana tantely | NewsMada
Boanamary-Faritra Boeny: natao ny voly hazo ho fanatsarana ny fiompiana tantely
Par Taratra sur 13/02/2019
Mahatsapa ny maro fa efa loza mitatao ny fiakaran’ny hafanana hatrany any amin’ny faritra Boeny ka nandray andraikitra namboly hazo, natao any amin’ny kaominina Boanamary, ny herinandro lasa teo. Asa niarahana amin’ny Vondron’olona ifotony, sy ny fikambanan’ny mpiompy tantely ho fanatsarana sy fiarovana io lalam-pihariana io.
Zanakazo mimoza (acacia) 1 500 ny novolena any amin’ny tanin’ireo mpikambana mpiompy tantely ireo. Miankina betsaka amin’ny fiarovana ny tontolo iainana ny fahazoana vokatra tantely tsara ka anisan’ny manatsara izany ny mimoza. Tsy ho tombontsoa ho azy ireo ihany ny voly hazo natao fa ho an’ny taranaka koa, raha nambaran’ny iray amin’ireo mpiompy tantely.
Nisy ny dinika fihaonana tamin’ny mponina taorian’ny fambolen-kazo, notarihin’ny talen’ny fampandrosoana ny faritra. Fotoana nitateran’ireo mponina ny olana tamin’ny tompon’andraikitra izany mba tena hisy marina ny fampandrosoana. Ny kaominina Boanamary, ohatra, mahavokatra betsaka, saingy tsy misy firy ny mpanangom-bokatra tonga any an-toerana ka voatery mivarotra mora ny mpamboly. I Boanamary anefa, tsy lavitra fa 30 km monja miala avy eo Mahajanga. Ratsy ny lalana mankany amin’io kaominina io na misy fifandraisana amin’ny RN4 aza.
Ratsy lalana ny kaominina maro
Namaly azy ireo ny talen’ny fampandrosoana ny faritra, Randriambololona Marcelin, fa betsaka ny vonona hampiasa vola, miainga avy amin’ny tetikasa maro nofaritan’ny faritra. Na vaovao tsara aza izany ho an’ny mponina, tsy misy fampandrosoana azo antenaina raha tsy vita ny lalana. Raha ny faritra Boeny: kaominina sivy, telo volana mandritra ny taona tsy tongan’ny fiara ; misy 12, enim-bolana ihany ny azo idiran’ny fiara (fa tsy ny fiara rehetra) ; ary valo, tsy azo aleha mandavantaona raha tsy amin’ny sarety.
Indray mijery 20/05/2019
Kitra – «Can 2019»: ireo fandaharan-dalao miisa 52 20/05/2019